တရားအတုအယောင် “ဇင်” ၀ါဒ	Posted on October 5, 2009	by mettayate မဟာယာနနှင့် တရုတ်ရှေးဟောင်း တာအိုဝါဒတို့မှ ဆင်းသက်လာသော ဇင်ဝါဒသည် အနောက်နိုင်ငံအချို့အထိ ပျံ့နှံ့နေရာမှ အသစ်အဆန်းကြိုက်သူတို့၏ ဆန္ဒအရ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ မျက်နှာဖုံးစွပ်၍၀င်လာခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့သည် ဇင်ဝါဒနှင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒတို့၏ ခြားနားမှုကို မသိနိုင်ဘဲ သစ်ငုတ်တိုတိုသရဲထင်သလို ဇင်ဝါဒကိုပင် ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟု ထင်နေကြသည်။ ကဿပသံယုတ်ပါဠိတော် သဒ္ဓမ္မပဋိရူပကသုတ်၌ “အခြားဝါဒများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို မဖျက်နိုင်ကြောင်း ဗုဒ္ဓ၀ါဒအတုသည်သာ ဗုဒ္ဓသာသနာကို ဖျက်နိုင်ကြောင်”း ကို ဗုဒ္ဓက တိတိကျက်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
This entry was posted in မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ပိဋကတ်သုံးပုံ သူရဿတီစောင့်
zayya says:	November 12, 2011 at 8:18 pm	ဒီလို အသိပေးစကားဟာ တန်ဖိုး ကြီးမားလှပါတယ်။
Reply	Ibrahamic base says:	January 22, 2012 at 10:13 am	it’s suchashame.
Reply	mettayate says:	July 17, 2012 at 7:17 am	ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက် ဘုရားရှင်ရဲ့ အမွေ – တရားစစ်၊ တရားမှန် (တစ်နည်း -ထေရ၀ါဒ) မှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံကို ထည့်သွင်းထားတဲ့ ၀ါဒ အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်လာသည့် အဆင့်ဆင့်ကို သံဃာယတနာတင်ပွဲအကြောင်း ပို့စ် တင်ထားတာကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ “ဇင်” ၀ါဒသည် ဘယ်လိုဝါဒမျိုးဖြစ်သည်ကို စိတ်မ၀င်စားပါ. အဓိက သိစေချင်တာက ထေရ၀ါဒကို ပြုပြင်ထားသည့်ဝါဒများထဲက တစ်ခုဆိုသည်ကိုသာ သိချင်စေပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတိုင်း တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်။ မိရိုးဖလာသည်သာ များ၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓက ‘တရားကိုမြင်မှ ငါဘုရားကို မြင်မည်ဟု’ ဟောကြားတော်မူခဲ့ဖူးပါ၏။ တရား ကို မြင်အောင် ကြိုးစားနေတုန်းဖို့ အနန္တကျေးဇူးရှင်-ဘုရားရှင်အား မမြင်နိုင်သေးပါ။ စဉ်းစားစရာ/စမ်းစစ်မှုတစ်ခုပေးတဲ့အတွက် ကိုရေခဲအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နောက်လည်း ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်တော်တော်ကြာမှ အကြောင်းပြန်နိုင်လို့ နားလည်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အစဉ်အမြဲ အေးမြပါစေလို့ မေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။